Vingrup waxay heshay boqolkiiba 51% BQ si rasmi ah | Androidsis
BQ waa sumadda ugu caansan ee Isbaanishka loogu yaqaan suuqa dhexdiisa. Calaamadda ayaa magac ku yeelatay suuqa, in ka badan hal milyan oo telefoon iibiyay 2017. In kasta oo imaatinka Spain ee noocyada sida Xiaomi ay saameyn ku yeesheen shirkadda. Sidaa darteed, waxaa lagu qasbay inay raadiyaan xalal cusub, oo looga fogaado dhibaatooyinka sida ERE noolaa bartamihii sanadkan. Waxayna u muuqataa inay horeba u heleen.
Sida Vingroup, kooxda teknoolojiyadda ee ugu weyn Vietnam waxay ku dhawaaqdaa taas waxaa lagu sameeyaa 51% BQ. Iibsi keenaya dhowr isbeddel oo muhiim ah astaanta. Labadaba horumarka iyo wax soo saarka iyo suuqgeynta isku mid ah.
Toddobaad ka hor ayaa la yiri sidaas BQ wuxuu bilaabay inuu soo saaro taleefannadiisa Vietnam, halkaasoo ay ka furteen warshadoodii ugu horreysay, iyadoo ay ugu wacan tahay iskaashiga shirkadda Vingroup. Waxay umuuqataa in howlgalka ay kujiraan waxbadan, maxaa yeelay kooxda Aasiya waxay durbaba lawareegaysaa inta badan shirkada. Wax soo saarkii waa la dhaqaajiyay oo sidan ayuu ka raqiisan yahay.
Telefoonada Vsmart waxaa lagu soo saari doonaa warshaddan cusub. Lama oga in sumadda BQ ay baaba'ayso oo waxay noqon doontaa Vsmart, dareenkan ma jirin wax xaqiijin ah oo arrintan la xiriira. In kasta oo tani u muuqato gelitaanka shirkadda ee suuq cusub. Wax wanaagsan ka dib hoos u dhac ku yimid iibka Spain.
Shaki la'aan, tani waa isbadal weyn shirkada. In kasta oo daqiiqadihii xumaa ay noolaayeen sannadkan oo dhan, haddana waxay u muuqataa inay tahay xal dammaanad ka qaadaya jiritaankeeda muddada dhexe. In kasta oo aanaan hayn xog ku saabsan waxa qorshooyinka gaarka ahi noqon doonaan. Xilligan la joogo ma jirto wax xaqiijin ah.
Waan arki doonaa waxa ku dhaca BQ bilaha soo socda. Sababtoo ah waxay ballanqaadayaan inay fure u noqon doonaan mustaqbalka shirkadda, oo hadda ku jirta gacanta kooxda Vingrup. Sideed u aragtaa warkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » Vingrup, oo ah kooxda tiknoolajiyadda ugu weyn ee Vietnam, ayaa la wareegtay aqlabiyadda BQ